भारतीयहरु खाना नपाएर निःशुल्क भोजनका लागि हाम्रो देशमा आउँछन् ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/भारतीयहरु खाना नपाएर निःशुल्क भोजनका लागि हाम्रो देशमा आउँछन् !
भारतले पटक–पटक बंगलादेशका नागरिक अवैध रुपमा आफ्नो देशमा घुसेको आरोप लगाएपछि ढाकाले पनि जवाफ फर्काएको छ । बंगलादेशका विदेशमन्त्री डा. एके अब्दुल मोमेनले भारतीय नागरिकहरु राम्रो अर्थव्यवस्था र निःशुल्क भोजनका लागि बंगलादेश आइरहेको आरोप लगाएका छन् ।
सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले भारतीयहरु बंगलादेशमा आइरहेको खुलासा गरेका हुन् । भारतीयहरुले बंगलादेशमा राम्रो जागिर र निःशुल्क भोजन पाइरहेको पनि उनले टिप्पणी गरे । भारतीयहरु बंगलादेशमा आउने गरेको प्रश्नमा उनले बंगलादेशमा अवैध रुपमा रहेका भारतीयलाई फिर्ता पठाइने पनि स्पष्ट पारे ।
भारतलाई जवाफ फर्काउदै बंगलादेशले आफ्ना नागरिकहरुलाई फिर्ता लिन आफुहरु तयार भएको पनि बताएको छ । भारतले सुची तयार गरेर दिएको खण्डमा आफुहरु आफ्ना नागरिक फिर्ता लिन तयार भएको उनले जिकिर गरे । उनले भारतको तुलनामा बंगलादेशको अर्थव्यवस्था उत्कृष्ट रहेको भन्दै बेरोजगार भारतीय बंगलादेश आइरहेको उल्लेख गरे ।
काठमाडौँमा निषेधाज्ञा लम्बिन के गर्ला ?
बैंक अफ काठमाण्डुले माग्यो कर्मचारी, जनवरी १४ भित्र दिनुहोस् निवेदन (सूचना सहित)
सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि परीक्षा प्रणाली परिवर्तन गरिँदै
अमेरिकाबाट एकाएक अन्तरवार्ता लिन आए रमेश, घर निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग समेत गरे…